ढुवानीका क्रममा १५ वटा खसी मरे, कहाँ-कहाँ पाईन्छ परीक्षण गरेका खसी, बोका ? - Arthatantra.com
ढुवानीका क्रममा १५ वटा खसी मरे, कहाँ-कहाँ पाईन्छ परीक्षण गरेका खसी, बोका ?
काठमाडौँ । दसैंका लागि काठमाडौँ ल्याउँदा ढुवानीका क्रममा मरेका १५ वटा खसी गाडिएका छन् । क्लिन नेपालका सञ्चालक पदम थापाका अन्ुसार मंगलबार ७ वटा र बुधबार विहानै ८ वटा गाडिएको छ ।
थापाका अनुसार गएको बर्ष कोरोनाका कारण बजारमा खासै चहलपहल भएन । २०७६ सालमा भने मरेका भेडा, च्याङ्ग्रा, खसी, बोका गरेर करीव ५० वटा जति मरेका चौपाया गाडिएको थियो । ‘
हामीलाई कलंकीबाट चाहिँ खबर आउँछ । अरुतिर पनि खसी बजार छन् । ती बजारबाट चाहिँ खवर आएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘खवर आउने बित्तिकै हामीले टोली पठाएर मृत चौपाया उठाएर गाड्न ल्याउने गरेका छौँ ।’
नवमीसम्म चौपायाको बिक्री धेरै हुने गरेको छ । कलंकी खसी बजारभित्रबाट मात्र होइन, बाहिर सडक किनाराबाट पनि व्यापारीहरुले चौपाया बेचिरहेका छन् । काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्रा. लि. का सञ्चालक व्यवस्थापक जीवन खतिवडाका अनुसार सडकमा चौपाया बिक्री रोक्नु पर्छ । यसले बजार व्यवस्थापनमा सघाउँछ ।
महानगरभित्रका दसैं लक्षित चौपाया बजारहरु कलंकी, खाद्य संस्थान थापाथली परिसर, टुकुचा खसी बजार र बालाजु वाइपास क्षेत्र हुन् । महानगरका पशु विकास अधिकृत डम्मरबहादुर बमका अनुसार यी बजारमा विहान ७ बजेदेखि १२ बजेसम्म एउटा टोली र १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म अर्को टोली गरेर २ वटा टोली नियमित परिचालन गरिएका छन् ।
वि.सं.२०७८ असोज २७ बुधवार १२:०६ मा प्रकाशित
अघिल्लाे घरैमा बनाउनुहोस् रेस्टुरेण्टको जस्तै सुकुटी
पछिल्लाे गाउँमा देखिँदैनन् युवा, भेटिँदैन पिङ !